Bọchị 3 na Tim Cook: nke a bụ CEO nke Apple | Esi m mac
Bọchị 3 na Tim Cook: nke a bụ CEO nke Apple
Mgbe Rajiv makhni natara oku site n'aka ndị otu Apple n'etiti ụtụtụ, onye nta akụkọ India enweghị ike ikwenye ohere ndị otu Cupertino nyere ya. Tim Cook ga-aga India na njem ụbọchị 4 ma nọrọ 3 n'ime ha na-ejegharị na mba niile na ụlọ ọrụ ya naanị.
Rajiv Makhni kekọrịta n'etiti Oge Hindu ahụmịhe gị na onye isi ọrụ site na otu ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa maka ụbọchị 3 na-ejegharị na mba ahụ. Na Soydemac anyị na-ekpughe ihe kachasị mma Tim Cook dị.
Apple CEO gara India n'ebumnuche nke banye na ọdịbendị nke obodo ma ghọta agwa na omenala nke India. O mere nke a omume omenala na nleta mmasị na enyemaka iji gosi dị iche iche dị ka a egwuregwu egwuregwu, ndị Mehboob ndekọ studio nke Bollywood, na nyochaa nke ndị dị oke ọnụ ahịa okpukpe gburugburu n'ụlọ nsọ Siddhivinayak.
Nke a bụ obere akụkụ nke N'ajụjụ ọnụ nke Cook na-agwa Makhni banyere ahụmịhe ya na mba ahụ na ahịa ahịa.
Tim Cook: dị umeala n'obi, dị mfe ma na-eme ihere.
Odeakụkọ Rajiv Makhni, ka na-etinye ihe ọghọm ịdaba na kọntaktị, kwetara na ya achọtala na Tim (dị ka ya onwe ya rịọrọ ka a kpọọ ya) nwoke dị mfe nke ịdị umeala n'obi dị ukwuu na Tim n'onwe ya na-ekwu na agụmakwụkwọ nne na nna gị natara: «Ọ dị mkpa ịmara mgbe niile maka ngọzi gị iji weghachite ha na ọha mmadụ.»
N'oge ahụmahụ a dị ịtụnanya, Makhni nwere ohere izute Tim Cook mmalite riser, n'oge, ihere na ezigbo nsọpụrụ na a nnukwu njikọ na eziokwu na okike, "dị ka a ga - asị na ọ maghị ike ọ na - ejide n'isi otu ụlọ ọrụ kachasị baa uru ma nwee ọganiihu.»
O doro anya na Apple achọtala na India ụzọ dị mma maka ire ahịa ọ gbakwunyere nzọ dị egwu iji tinye n'ike ma kwado na «ga-anọ na India maka 1000 afọ ọzọ. "
Isi mmalite - Oge Hindu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Bọchị 3 na Tim Cook: nke a bụ CEO nke Apple
Ihe ntụgharị ọ bụla nke AVI na ihe ọ bụla MOD Ntụgharị n'efu maka obere oge
Tim Cook anọghị na ndepụta nke ndị isi ego kachasị akwụ ụgwọ